Silicone iraba - Changzhou longxin Machinery Co., Ltd
Silicone iraba kuyinto iraba uchungechunge kabani main yakhiwa Silicon nomoya-mpilo-athomu omoya-yanjalo, futhi kukhona ngokuvamile amaqembu amabili organic exhunywe kuya kuma-atom silicon. It has okuhle ongaphakeme lokushisa ukumelana naso futhi kwenze namanje ingasebenza ngesikhathi -55 ℃.
Kunezindlela eziningi ekulinganisweni abicah zenjoloba. Ngokusho ifomu kokuba ayiphulukise, kungashiwo ihlukaniswe Igumbi lokushisa ephekiwe abicah iraba, izinga lokushisa eliphakeme ephekiwe abicah zenjoloba. Ngokwe monomer esetshenziswa, kungashiwo ihlukaniswe methyl vinyl abicah iraba, methyl phenyl vinyl abicah iraba, fluorosilicone, nitrile abicah iraba nokunye. Futhi ngokusho umehluko ukusebenza kanye nokusetshenziswa, kungashiwo ihlukaniswe hlobo jikelele, aphansi lokushisa uhlobo nemithi, super eliphezulu lokushisa uhlobo ukumelana, high amandla uhlobo, uwoyela uhlobo nemithi, uhlobo yezokwelapha nokunye.
Ncoma imishini zokukhiqiza izimonyo: LXQLF Series Multi-function Kathathu Shaft Mixer, LXQLFQ Series Enhanced Multi-function Kathathu Shaft Mixer, LXXJB uchungechunge mixer kwamaplanethi, LXDLH Series amandla kwamaplanethi mixer,